Umlando - XGEAR
Siqale emikhiqizweni yochungechunge lwasolwandle ngokwakha i-Boat Covers, i-Bimini Top ne-Boat Seat, futhi kancane kancane sibe umholi wemboni.
Sakha imikhiqizo yokukhempa yangaphandle, ikakhulukazi amatende futhi i-Pop Up Shelters ithandwa kakhulu ngabathengi.
Sanweba umugqa womkhiqizo waba igiya lezemidlalo futhi sathuthukisa izimpahla zezemidlalo zokungcebeleka njengochungechunge lwethenisi yetafula.Iphinde yethula i-Inflatable Stand Up Paddle Board ehlomule ngazwi linye.
Siqhubekile nomugqa womkhiqizo wezemidlalo futhi sathuthukisa i-Battle Ropes yokuqeqeshwa okuyisisekelo, amasethi e-Agility ladder kanye nemikhiqizo yochungechunge lwe-Yoga.
Sakhe Izihlalo Zasolwandle zangaphandle futhi ngasikhathi sinye safaka isicelo selungelo lobunikazi lokubukeka lase-US.Okunye, sithuthukise i-ISUP ngokuthuthukisa inqubo yokubopha nokubukeka, ehlala isikhathi eside nemfashini.
Sigxile ekuthuthukiseni ukwakheka kwemikhiqizo yochungechunge lweMarine, siphinde sithuthukise ukwakheka kwemikhiqizo yezemidlalo.Ngokuzayo, sizohlala sinentshisekelo yokusungula imikhiqizo ekhona kanye nokwandisa inhlobonhlobo yemikhiqizo ukuze ihambisane nendlela yakho yokuphila.